Madaxweyne Xaaf oo gaaray Magaalada Garoowe si uu uga qeybgalo shirka wada tashiga ee Garoowe.
May 4, 2019 - Written by Editor
Garoowe:- Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelle, ayaa goordhaw soo gaaray Magaalada Garoowe si uu uga qeybgalo shirka wadatashiga Dowlada Fedraalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah uga furmi doona Caasimada Puntland ee Garoowe.
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni iyo xubno ka tirsan labada Gole ee xukuumadiisa ayaana Garoonka Diyaaradaha Garoowe ee Gen. Maxamed Abshir si diiran ugu soo dhoweeyey Madaxweyanaha Galmudug iyo wafdiga uu hoggaaminayay.
Sidoo kale waxaa soo dhaweynta qeyb ka ahaa xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan DG Galmudug oo horudhac u ahaa wafdiga madaxweyne Xaaf.
Shirka wadatashiga ayaa la filayaa inuu si rasmi ah beri u furo madaxweynaha JFS, dhinacyada ka qeybgalayana waxaa ka muuqata biseyl siyaasadeed iyo isu-soo dhawaasho.